Mijanona Ho “Hentitra” Hitokona Tsy Hihinan-kanina Iray Volana Ireo Gadra Palestiniana Noho Ny Fepetra Iainana Ao Amin’ny Fonja Israeliana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Mey 2017 4:42 GMT
Sary: Tambajotra Firaisankinan'ny Gadra Palestiniana Samidoun.
Nanao fitokonana faobe tsy hihinan-kanina ny gadra politika Palestiniana mihoatra ny 1500 ao amin'ny fonja Israeliana , mifady sakafo sy zava-pisotro mandritra ny 30 andro misesy noho ny tolona fikirizana manohitra fihoaram-pahefana.
Nipoaka ny fifandonana tao Morondrano Andrefana rehefa nivory ireo Palestiniana ho fanohanana ny fitokonana tsy mihinan-kanina. Tamin'ny 12 May, namono Palestiniana iray 23 taona ny tafika Israeliana tao Morondrano Andrefana, tanànakelin'i Nabi Saleh rehefa voan'ny bala teo amin'ny tratrany avy hatrany ity lehilahy ity. Naratra ihany koa ny Palestiniana am-polony hafa tao Nablus, Qalqiliya, ary Hebrona.
Nanomboka tamin'ny andro fahatsiarovana ny Gadra Palestiniana isan-taona isaky ny 17 Aprily ny fitokonana. Notakian'ny mpandray anjara ny fampitsaharana avy hatrany ny fanaovana tsinontsinona ny fitsaboana, fanokanan-toerana, ary ny fanagadrana ara-panjakana fanaon'ny manampahefana Israeliana mahazatra ary ahitana ireo olona voafonja hatramin'ny enim-bolana miaraka amin'ny fanavaozana an'izany hatrany tsy misy fitsarana na fiampangana .
Misy Palestiniana eo ho eo amin'ny 500 eo no notànan’ Isiraely amin'ny fanagadrana ara-panjakana izay mifototra amin'ny porofo miafina. Mandika ny lalàna iraisampirenena ny fampiasan’ Israely mitohy ny fanagadrana ara-panjakana ary efa nokianin'ny Firenena Mikambana , ny Vondrona Eoropeanina , sy ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona matetika .
ANDRO faha 30
Rano sy sira ihany, ny faniriana ny fahafahana ihany, ny rariny sy ny fandriampahalemana ihany
Mitokona ihany koa ireo voafonja mba hanatsarana ny fepetra iainana toy ny fitsidihan'ny fianakaviana lava kokoa sy matetika kokoa, ny fahafahana mianatra amin'ny ambaratonga faharoa sy amin'ny fianarana ambony, ary ny fahafahana mahazo fitsaboana ara-pahasalamana sy fikarakarana tsara kokoa, ankoatra ireo maro hafa .
Mbola nandà ny hamaly ny fitakian'ireo gadra hatreto i Israely. Ho setrin'izany, nanambara i Marwan Barghouti, mpitarika ny fitokonana tsy mihinan-kanina, fa hanamafy ny fitokonana izy ary tsy hisotro rano intsony. “Tsy misy miverin-dàlana eo. Hanohy hatramin'ny farany izahay “, hoy izy .
Miantso ny Palestiniana ihany koa i Barghouti mba hanao ny hetsi-panoherana am-pilaminana ho fanohanana ny fitokonana tsy mihinan-kanina sy hanao fahatsiarovana ny tsingerin-taona faha-69 ny Andron'ny Nakba , andro izay hanamarihan'ny Palestiniana ny fifindrana niaraka tamin'ny fananganana ny fanjakan'i Israely ankehitriny.
Niezaka ny hanakana ny fitokonana ny manampahefana Israeliana tamin'ny alàlan'ny fampiasana fepetra maro toy ny fifehezana ny gadra tamin'ny alàlan'ny bemidina tampoka sy matetika tao am-ponja miaraka amin'ny etona sy ny alikan'ny polisy, ny fanakanana ireo voafonja tsy handeha hivoaka ny faritra iraisana, ary naka ny fitafiany sy ny entan'izy ireo ka nampisaraka ny mpandray anjara tamin'ny mpitarika ny hetsika, ary nanidy azy ireo irery tao amin'ny efitra figadrana maloto .
Amin'ny ezaka mba handravana ny fitokonana mendrika, namindra gadra sy voafonja Palestiniana maro tany amin'ny toerana mitokana ny manampahefana Israeliana .
Tamin'ny vao nanomboka ny fitokonana, namindra an'i Barghouti sy ny gadra roa hafa, dia i Karim Younis sy Mahmoud Abu Srour, tany amin'ny efitra mitokana ny Sampandraharahan'ny fonja Israeliana. Namoaka lahatsary tsy misy daty ihany koa izy ireo izay nolazaina fa mampiseho an'i Barghouti mihinan-kanina mangingina tao an'efitra figadrana; nilaza ny fianakavian'i Bargouthi sy ny mpanohana azy fa mandainga ny manampahefana Israeliana ary efa tany amin'ny folo taona lasa tany ny lahatsary.
Araka ny tatitra avy amin'ny mpisolovavan'ny gadra, tetika iray hafa ny fampiharihariana sakafo manoloana ireo mpitokona tsy mihinan-kanina mba hanerena azy ireo, na ny tsy fanomezana ny fanampiana ara-pitsaboana maika raha tsy mamarana ny fitokonana izy ireo.
30 ANDRO tsy misakafo.. mbola mitohy manampi-maso ihany izao tontolo izao…!
Nanoratra taratasy misokatra i Karim Younis, ilay gadra Palestiniana ela indrindra tao am-ponja Israeliana izay manome toky ny vahoaka Palestiniana fa mbola manohy ny hetsika ireo voafonja manao fitokonana tsy mihinan-kanina na dia eo aza ny fepetram-pamoretana ataon'i Israely. Nilaza ihany koa izy fa vonona hanao fifampiraharahana matotra miaraka amin'ny Sampan-draharahan'ny Fonja Israeliana ireo gadra:
Ry olona manan-kaja,
Ato anatin'ny fonja miorina mafy, ny fahalalahana sy ny fahamendrehana ato amin'ny efitra fitokana-monina ato amin'ny Fonjan'i Ramla, miarahaba anareo izahay, ary manao antso aminareo tsirairay.
Manome toky anareo amin'ny fiorenanay mafy sy ny fanapahan-kevitray mandra-pahazo fandresena izahay na oviana na oviana ny faharetan'ny tolona .
Manome toky ny vahoaka izahay fa tsapanay ny vaovao momba ny firaisankina sy ny fanohanan'izy ireo anay na dia eo aza ny fanokana-monina sy ny fahirano, ary mino tanteraka ny fandresena tsy azo ihodivirana izahay na dia miatrika fandrahonana aza ny tolona.
Raha nampiasa ny endriky ny fepetram-pamoretana rehetra ny manampahefanan'ny fonja mba handravana ny fikasanay sy hifehezana anay, vao mainka mampitombo ny fanapaha-kevitray hanohy ny fitokonana tsy mihinan-kanina ireo fepetra ireo.
Hita eto ny votoatin'ny taratasy feno ao amin'ny vohikalan'ny vondrona mpisolovava antsoina hoe Fanohanana ny Gadra ADDAMEER sy ny Fikambanana mpiaro ny Zon'Olombelona.